» “अर्थमन्त्री शर्माको अर्को चमत्कार : अब नेपालमै धमाधम मोबाइल उत्पादन, महाबिर पुनको साथ” “अर्थमन्त्री शर्माको अर्को चमत्कार : अब नेपालमै धमाधम मोबाइल उत्पादन, महाबिर पुनको साथ” – हाम्रो खबर
हाम्रोखबर संवाददाता 1391 Views
“काठमाडौं । अर्थमन्त्री ,जनार्दन शर्माले नेपालमै मोबाइल उत्पादन गर्न मोबाइल व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । यसका, लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको, उनले बताए ।”
“बुधबार नेपाल मोबाइल, वितरक संघको महाधिवेशन उदघाटन गर्दै ,अर्थमन्त्री शर्माले सो कुरा बताएका हुन् ।”
“उनले मोबाइल डिभाइस, म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तत्काल, लागू गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको, जानकारीसमेत दिए । अवैध रुपमा हुने कारोबार र राजश्व चुहावट रोक्न सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने ,मन्त्री शर्माले बताए ।”
“एमडीएमएस गत, साउनदेखि नै लागू गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर अझै लागू हुन सकेको छैन । ठूलो मात्रामा अ,वै,ध मोबाइल, भित्रिने क्रम नरोकिएको भन्दै व्यवसायीहरुले एमडीएमएस लागू तत्कालै गर्नुपर्ने भन्दै, अर्थमन्त्रीको ,ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।”
“यो समाचार सुन्ने बित्तिकै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बाट महबिर पुन ले सहयोग गर्न तयार छौ भन्दै लेख्नु हुन्छ।”
“लौ जा ठोकेरै भनियो, गल्ति भएमा माफ दिनु होला”
“अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माज्यूले नेपालमै मोबाइल उत्पादन गर्न मोबाइल ,व्यवसायीहरु लाई आग्रह गर्नु भएको रहेछ । यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनु भएछ । यदि यो समाचार सहि हो भने मन्त्रीज्यूले तलको काम गर्नु पर्छ। अनि मोबाइल बन्ने नबन्ने कुरा थाहा हुन्छ।”
“१. कुनै पनि चिज चाहे सानो होस् वा ठुलो होस् छु-मन्तर गरेर बन्दै बन्दैन। त्यसको लागी अनुसन्धानकर्ता र नबप्रबर्तकहरुले, निकै नै समय र दिमाग खर्चेर गहन अनुसन्धान तथा बिकासको काम गर्नु पर्छ। त्यस्तो R&D गर्ने ठाउँ खोइ त कहाँ छ र त्यसको लागि अनुसन्धानकर्ताहरु लाई प्रत्साहन गर्ने पैसा र नीति नियम कहाँ छ?? पहिला ठाउँ, श्रोत र नीति नियम बनाउनु ,पर्छ अनि आग्रह गर्नु पर्छ।”
२. मन्त्रीज्यू ता, तयार नै हुनु होला किन भने मन्त्रीहरुको मुख बाट यस्तो कुरा फ्याट्टै आउँछ। तर अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिबहरु र सहसचिबहरुलाई पनि तयार पार्नु पर्छ किन भने कुनै नयाँ काम गर्न खोज्दा जेल्ने, जालझेल गर्ने र तगारो हाल्ने मन्त्रालयका सचिबहरु र सहसचिबहरु नै मुख्य हुन्। अनि योजना आयोगका अर्थ र उद्योग हेर्ने सदस्यहरु र मन्त्रालयका बिज्ञ सल्लाहकारहरु लाई पनि तयार पर्नु पर्ने हुन्छ। यी सबै प्रशासकहरु र बिज्ञहरु तयार भए भने र सकारात्मक कदम चाल्यो भने उद्योगीहरु त तयार भै हाल्छन।”
“मन्त्रीज्यू, त्यति गर्ने साहस बटुल्नु होस् त। अनि हामी पनि जिउंदै छौं नि।